एम्बाप्पे पीएसजीमै रहने पक्का ! – Nepal Online Khabar
भाद्र १५, २०७८ मंगलबार 430
काठमाडौं : अन्ततः किलियान एम्बाप्पे यो सिजन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)मै रहने भएका छन् । युवा खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्ने छलफलबाट रियल पछि हटेपछि उनी यो सिजन फ्रेन्च क्लबमा नै रहने पक्का भएको हो ।
रियल जाने मुडमा रहेका एम्बाप्पेले पनि पीएसजीले उनीसामु राखेको करार नवीकरणका ६ वटा अफर अस्वीकार गरेका थिए । अब रियलले एम्बाप्पेसँग छलफल शुरु गर्न जनवरीसँग पर्खनुपर्नेछ ।
जनवरीमा प्रारम्भिक करार गरेर अर्को सिजनमा सित्तैमा एम्बाप्पेलाई सित्तैमा भित्र्याउन सक्नेछ ।क्लब छाड्ने हल्लाबीच एम्बाप्पेले आइतबार रेइम्सविरुद्धको खेलमा शुरुवात गरेका थिए । २–० को जीतमा उनले नै दुवै गोल गरेका थिए ।
Prevबालिका ब’लात्कारको आ’रोपमा फरार शिक्षक प’क्राउ !
क्रिकेट टोलीको नयाँ जर्सीका लागि ५०० भन्दा बढी डिजाइन प्राप्त